Qaabkan ayay xisbiyadu u kala heleen natiijada doorashadii shalay. - NorSom News
Qaabkan ayay xisbiyadu u kala heleen natiijada doorashadii shalay.
ilaa hada inta la tirayay codadka doorashadii deegaanka ee shaley ka dhacday guud ahaan Norway, ayaa muujineyso in xisbiga Ap, Høyre iyo Sp ay heleen codadka ugu badan ee natiijada doorashada.
Xisbiga Ap ayaa helay 24,8 % codadka ilaa hada la tiriyay, halka Høyre uu helay 20,1 %, iyada oo xisbiga Sp uu helay 14,4 %. Qaababka ay xisbiyadu u kala heleen ka fiiri sawirka.
Oslo: Xisbiyada bidixda oo Oslo sii maamuli doono.
Magaalada Oslo ayaa wali u muuqata inay sii xukumi doonaan xisbiyada bidixda, maadaama xisbiga MDG uu doorashada ka keenay guul lama filaan ah. Wuxuuna MDG helay 15,2% codadkii la tiryay Oslo. Xisbiga Rødt iyo SV ayaa iyagana guul fiican ka soo hoyay magaalada Oslo.
Halkan ka fiiri doorashada iyo sida loo kala helay gobolada dalka oo dhan.
Previous articleSadex askari oo maxkamad loo soo taagay toogashada wiilkan xanuunsanaa.
Next articleXisbiga Ap oo guuldaro la filayay ay kasoo gaartay doorashadii shaley.